Igwe na-agbatị ihe nrụpụta & Ndị na-ebunye ya - China igwe gbatịchara ihe nkiri Factlọ ọrụ
Guangdong Xinzhihui Nkwakọ ngwaahịa Technology Co., Ltd. anna.sales@xh-pack.cn Ekwentị: +86 18122866001
Igwe gbatịrị ihe nkiri
Ihe nkiri na-acha agba agba
Jumbo Stretch Nkiri
Ihe nkiri a gbatịrị agbatị
Ihe Nkiri Na-esetị Aka
Obere ihe nkiri
Industrylọ ọrụ ngwa
Ihe nkiri nke mbu
Agba ndinyanye Kechie Film
Bundling Stretch Kechie Film ...
Obere Ihe nkiri Nke Mpe
Akwụkwọ ntuziaka gbasaa
Igwe pallet kechie ihe nkiri
Isi: A na-ejikarị ihe eji eme ihe na-eme ihe maka Igwe na-akpaghị aka na nke zuru ezu. Machine ọkwa gbatia nkiri nwere elu tupu gbatia ike. Adabara dị iche iche oge ufodu ibu. Njirimara: Typedị: Nkedo Ike: soft soft: uzo Atụmatụ: mmiri na-àmà nhazi Typedị: Nkedo nkọwapụta: Xinzhihui tensile film nwere magburu onwe elongation, ndinyanade mbịne ọnụego nwere ike iru 300-500%, mgbe elongation nke ndị nkịtị tensile ịse bụ naanị 150 .. .
Igwe ọkwa gbatia ihe nkiri
Isi: A na-ejikarị ihe eji eme ihe na-eme ihe maka Igwe na-akpaghị aka na nke zuru ezu. Machine ọkwa gbatia nkiri nwere elu tupu gbatia ike. Adabara dị iche iche oge ufodu ibu. Xinzhihui LLDPE igba igwe gbatia film bụ ihe kwesịrị ekwesị maka ngwa na akpaka wrapping igwe, nke nwere elu arụmọrụ na ọtụtụ-eji na FMCG ụlọ ọrụ, electronic ngwaahịa, akwụkwọ Ndinam, lọjistik, Chemicals, ụlọ ihe na iko, wdg ịzọpụta ọrụ na-eri ...
Igwe ihe eji eme ihe eji eme ihe
Isi: Esetị kechie fim dị oké mkpa ka nkwakọ ụlọ ọrụ na ọ bụ iji nwere na-echebe gị na ngwaahịa si n'ebe n'èzí na-efe efe dị ka ájá na nje. Igwe na-agbatị ihe nkiri dị mma maka ojiji na igwe, usoro ahụ dị iche na ntuziaka eji eme ihe nkiri nke ga-enwe ike ịrụ ọrụ dị mma, nke kwesịrị ekwesị maka ngwa izugbe na ngwugwu oge ụfọdụ, belata na ụgwọ ọrụ. Njirimara: Ihe: Polyethylene :dị: Gbatia film ojiji: igwe gbatia nkwakọ film H ...
201lọ 201, ụlọ 1, No.9, fuduyuan Central Road, obodo Qiaotou, Dongguan City